Rita, Writing for My Sake!: May 2011
တက္ကသိုလ်ဆရာ - အောင်သင်း
ကျွန်တော့်ကို စင်မြင့်တွင် စကားပြောကောင်းသူဟု မိတ်ဆွေများကလည်းကောင်း၊ စာရေးဆရာအချင်းချင်းကလည်းကောင်း ချီးမွမ်းကြပါသည်။ ထို့အတူ တပည့်များကလည်း စာသင်ကောင်းသောဆရာ၊ အပြောကောင်းသောဆရာဟု ချီးမွမ်းကြပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်သည် တကယ်ကိုတော်သော ဆရာတစ်ယောက် မဟုတ်သေးကြောင်း ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် အသိဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အထက်တန်းကျောင်းသားများကို သင်ကြားပေးရသည့် ဆရာမျိုးဖြစ်လျှင်တော့ လူတော်ဆရာစာရင်းဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အဆင့်မြင့်ပညာဟု ဆိုအပ်သည့် တက္ကသိုလ်ဆရာတစ်ယောက်အနေနှင့် စဉ်းစားလိုက်လျှင် ကျွန်တော်သည် ခပ်ညံ့ညံ့ ဆရာတစ်ယောက်မျှသာဖြစ်နေသည်ဟု တကယ့်ကို ဘဝင်ကျကျ လက်ခံမိပါသည်။
တက္ကသိုလ်အဆင့် ဆရာတစ်ယောက် 'တော်ပြီ' ဆိုလျှင် တကယ့်ကို လန့်လောက်အောင် တော်တတ်သည်ဟု ထင်မိပါသည်။ ကျွန်တော့်အဖို့ ကုသိုလ်ကောင်းခဲ့သည်မှာ ထိုကဲ့သို့ လန့်လောက်အောင် 'တော်သည့်' ဆရာများကို ကြုံခဲ့ရဖူးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့သည် ပြဋ္ဌာန်းထားသော စာများကိုသာ သင်ပေးနေကြသည့် ဆရာမျိုးမဟုတ်ကြ။ စာသင်သားများ၏ အတွေးလိပ်ပြာ နှိုးပစ်လိုက်နိုင်စွမ်း ရှိကြသည်။ ပြဋ္ဌာန်းစာတွင် တွေ့ရသော ခက်ရာခက်ဆစ် အပိုင်းများကို စာသင်သားများ လွယ်ကူစွာ နားလည်သွားလောက်အောင် ရှင်းလင်းသင်ကြားနည်းမျိုးကို ကျွန်တော်လည်း ထိုက်သင့်သလောက်တော့ လုပ်နိုင်ပါသည်။
ထိုထိုသော ခက်ရာခက်ဆစ်များကို စာသင်သားတွေ နားလည်လွယ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သင်မလဲဆိုသည်ကို သွားရင်းလာရင်း စိတ်ကူးနေခြင်းဖြင့် ထိုအခက်အခဲကို လွန်မြောက်နိုင်ကြောင်း ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ဖြင့် သိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အထက်တွင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို အတွေးလိပ်ပြာ နှိုးနိုင်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်နိုင်သည် မဟုတ်ပါ။
ထိုကဲ့သို့ တကယ့်ကို တော်သည့် ဆရာများအနက် ဆရာနှစ်ပါးအကြောင်းကို ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့အဖြစ် ထုတ်ဖော်တင်ပြလိုက်ချင်ပါသည်။
ပထမတစ်ယောက်က ဆရာကြီးဦးဝန် (မင်းသုဝဏ်) ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော် ဝိဇ္ဇာတန်းကို အောင်မြင်ပြီးနောက် ပညာရေးဘွဲ့ (ဘီအီးဒီ)အတွက် ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက် သင်ကြားနေခိုက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာနသို့ ဆရာဦးဝန်က ပါမောက္ခအဖြစ် ဝင်ရောက် အမှုထမ်းရပါသည်။ ဆရာဦးဝန် ပါမောက္ခဖြစ်လာသောကြောင့်ပင်လျှင် ကျွန်တော်သည်လည်း မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် မြန်မာစာဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ပညာဆက်လက် သင်ယူခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့် ဆရာဦးဝန်၏ သင်ကြားပို့ချမှုကို နာယူခဲ့ရပါသည်။
ဆရာက ဘာသာစကားလေ့လာမှုကို သင်ကြားပေးသည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အသိဗဟုသုတပညာ အဘယ်မျှတိုးကြောင်းကို အထူးပြောနေစရာ မလိုပါ။ အံ့သြစရာလည်း မဟုတ်ပါ။ ရှေ့ကိုတိုးပြီးဖတ်ရန် မြန်မာစာအုပ်၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များကို သေချာပြပြီး အထူးပြုလေ့လာအပ်သည့် အဆစ်အပိုင်းတို့ကို ညွှန်ပြသင်ကြားပေးသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့အဖို့ ပညာလေ့လာမှုလမ်း ပွင့်လာလိုက်သည်မှာလည်း ပြောစရာမရှိတော့ပါ။ ယခု ကျွန်တော်ပြောချင်သည့် အကြောင်းအရာမှာ ထိုမျှလောက်ကို ပြောလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
ဆရာက ကျွန်တော်တို့အား ဘာသာစကားဆိုင်ရာ လေ့လာမှုကို သင်ပေးသည်ဖြစ်သောကြောင့် မွန်ဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသည့် 'ရွှေစည်းခုံကျောက်စာ' ကိုလည်း သင်ပေးရပါသည်။ ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်၏ မြန်မာပြန်နှင့် တွဲပြီး ရိုက်နှိပ်ထားသော စာအုပ်ကိုပင် ပြဋ္ဌာန်းသင်ကြားပေးပါသည်။ ဆရာက မွန်ဘာသာ၏ ဝါကျဖွဲ့ပုံ၊ စကားဖွဲ့ပုံတို့ကို ဘာသာဗေဒသဘောနှင့် ရှင်းလင်းသင်ကြားပေးပါသည်။
"မင်းတို့ ဒီ ရွှေစည်းခုံကျောက်စာမှာ ညီတော်အာနန္ဒာကို 'အာနန်' လို့ပဲ ရေးထားတာကို သတိထားမိကြရဲ့လား"
ထိုအချက်ကို အထူးပြောနေစရာမလိုပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး သတိထားမိကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် "မြတ်စွာဘုရား ပြုံးရယ်တော်မူသည်ကို မြင်သောအခါ အာနန်လည်း ဤသို့လျှောက်၏" "ဘုရားသခင်လည်း အာနန်အား ဤသို့မိန့်၏" စသော အသုံးမျိုးကို ဆရာက ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း သတိထားမိကြောင်းကို ပြောပြတော့ ဆရာက...
"အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ မင်းတို့ စဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်"
ကဲ စာဖတ်သူပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါတော့။ အာနန္ဒာကို အာနန်လို့ခေါ်တာ သူတို့ ခေါ်ချင်လို့ ခေါ်တာပဲပေါ့။ တိုအောင်လို့ ခေါ်တာဖြစ်မှာပေါ့။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့က ဘာထပ်ပြီး စဉ်းစားနေရဦးမှာလဲ။ ဒါပေမယ့် ခက်သည်က စဉ်းစားလောက်စရာ ပါလို့သာ အစဉ်းစားခိုင်းတာဖြစ်မှာပဲဆိုတာ တွေးမိလိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း စဉ်းစားပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘာမှကို မစဉ်းစားတတ်ပါ။ ဆက်ပြီး အချိန်ယူ စဉ်းစားမယ် ဆိုလျှင်လည်း ခေါင်းက မီးခိုးတွေ အူလာဦးတော့ ဘာမျှ ထွက်လာမည် မထင်ပါ။
နောက်တော့ ဆရာက စဉ်းစားစရာ အချက်တစ်ခုကို ပေးပါသည်။
"ဆရာ စဉ်းစားမိတာက ဒီလိုကွ။ နာမည်ကို အပြည့်မခေါ်တော့ဘဲ အဲဒီလို အတိုချုံးပြီး ခေါ်တာဟာ အတော်လေးရင်းနှီးလာကြမှ ခေါ်လေ့ရှိတာ မဟုတ်လား။ ဥပမာကွာ ဆရာတော် ဦးကဝိန္ဒဆိုပါတော့။ ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်ဘုန်းကြီးအဖြစ် ရင်းနှီးလာရင် "ဦးကဝိန်" လို့ပဲ ခေါ်တတ်ကြတယ်။
ဒီတော့ မွန်လူမျိုးတွေဟာ မြစေတီကျောက်စာထက်တောင် စောသေးတဲ့ ဒီရွှေစည်းခုံကျောက်စာကို ရေးထိုးချိန်မှာ ညီတော်အာနန္ဒာနဲ့ အတော့်ကို ရင်းနှီးနေပြီလို့ မယူဆသင့်ဘူးလား၊ နောက်ပြီး ချစ်ခင်ကြည်ညိုတဲ့ အသံကလေးရော မပါဘူးလား၊ မွန်လူမျိုးတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရော ရှင်အာနန္ဒာစတဲ့ ဗုဒ္ဓဝင်ဇာတ်ကောင်တွေ အကြောင်းကိုရော ကြားနာပြောဆိုမှု အတော်ကြီးကို များနေပြီလို့ ဆိုနိုင်စရာ မရှိဘူးလား"
ကျွန်တော် တကယ့်ကို လန့်သွားတာပါ။ လန့်လောက်သည့် အတွေးအမြင် မဟုတ်ပေဘူးလား။ ဒီလို စုံထောက်မောင်စံရှား လုပ်နည်းမျိုးကို ကျွန်တော်ဖြင့် ယောင်လို့တောင် မတွေးခဲ့မိဖူးပါ။ ဆရာက ဆက်ပြီး ပြောပါသေးသည်။
"ဒါက ဆရာတွေးမိတာကို ပြောလိုက်တာနော်။ အခိုင်အမာတော့လည်း မယူလိုက်နဲ့ဦး။ ဆရာတွေးသလို ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပေါ့။ မင်းတို့ ဆက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ဖို့ ပြောလိုက်တာ"
ဒါကတော့ ဆရာ့ထုံးစံပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ လှေနံဓားထစ် မှတ်ချက်မျိုး ဆိုလေ့မရှိပါ။ ဆရာ စာသင်ကြားပုံမှာ တပည့်များအား စာပေသင်ကြားပေးနေသည်နှင့် မတူဘဲ (တက္ကသိုလ်အဆင့်မြင့်သည့်အတိုင်း) တပည့်များရှေ့တွင် သုတေသနစာတမ်းတစ်စောင်ကို ဖတ်နေသည်နှင့်ပင် တူနေသေးတော့သည်ဟုပင် ကျွန်တော် မကြာခဏ အောက်မေ့မိပါသည်။
"ရှင်အာနန္ဒာ" ကို "အာနန်" ဟု ခေါ်လိုက်ပုံကလေးမှ အစပြုပြီး သမိုင်းကောက်ချက်ကြီးတစ်ခုထိအောင် ဆွဲယူသုံးသပ်လိုက်ပုံကို ကျွန်တော် ယခုထက်တိုင် မမေ့နိုင်တော့ပါ။ လေ့လာမှုဆိုသည်မှာ ဤသို့ပါတကားဟူသော အသိကလေးလည်း ဝင်းခနဲပေါ်လာခဲ့ရပါသည်။ ...
Posted by Rita at 5/09/2011 08:30:00 AM4comments Links to this post
Labels: Sharing, အောင်သင်း
အညာ၊ အမေ၊ စာပေ နဲ့ လူကြီးဆရာ
ကောင်းပါသည်။ ကြိုက်ပါသည်။ တချို့သော အညာအကြောင်းအရာများ အလွန် ထိရှသည်ဟု ခံစားပါသည်။ ကိုယ်တိုင် အဲဒီနယ်နဲ့ ရင်းနှီးထဲဝင် ပတ်သတ်ခဲ့သူဖြစ်သောအခါ နားထောင်သူသက်သက်အဖြစ်ထက် ပိုသော ခံစားမှုတွေ ရရှိသည်ဟု ယူဆမိ။
သို့သော် စာရေးဆရာများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပြက်လုံးထုတ်ခြင်းကို ခံစား၍မရပါ။ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းများ ပြောဆိုခြင်းသည် တယောက်ချင်းစီ၏ လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်သော်လည်း၊ joke လုပ်ပြောလွန်းလာသောအခါ အီလှပြီ။ ထို့ပြင် လက်ခုပ်သံကို ထိုနည်းဖြင့်ယူရသည်ဟူသော ပုံသေနည်းများ ဖြစ်နေသလားဟု သံသယဝင်လာမိ။
(စာကြွင်း။ လူရွှင်တော်များ ပြက်လုံးထုတ်ခြင်း နှင့် ကာတွန်းများက သရော်ခြင်းကိုတောင် များသောအားဖြင့် အောင့်သက် ခံစားမရဖြစ်မိ။ သို့သော် ထိုနယ်ပယ်နှစ်ခုက သူတို့အလုပ် သူတို့လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ စာရေးဆရာများက နိုင်ငံရေးကိစ္စ လူရွှင်တော်လို သရော်သည်အား ခံစား၍ မရ။ တခြားနည်းအားဖြင့် ပရိသတ်ကို မက်ဆေ့ဂ်ျပေးလို့မရဘူးလား။ တခြားတင်ပြပုံနည်းလမ်း ရှာစေချင်မိ။)
ထူးခြားသည်မှာ ဆရာမ စကားတွေကနေ အညာကအသံကို ကြားရခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ကဲ့ရီ ခံရမယ်။ (နောက်ထပ် ရှိသေးသော်လည်း ချရေးမလာခဲ့ရလို့ မေ့သွားပြီ)
မိဘမေတ္တာ၊ အမေ့မေတ္တာ နှင့် ပတ်သတ်သော ခေါင်းစဉ်ဖြစ်၍ ဝေဖန်ရန် အလွန်တရာမှ တွန့်ဆုတ်စရာဖြစ်သော်လည်း၊ တကယ်တမ်းကျ တွန့်ဆုတ်မနေသောကြောင့် အလွန်တရာမက အလွန်တရာ့ငါးဆယ်လောက်ပင် ဝေဖန်ချင်မိ။
ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ဝေဖန်ချင်တာမဟုတ်ဘဲ ဆရာချစ်စံဝင်းကို မေးခွန်းတွေသာ ထုတ်ချင်တာဖြစ်နေပြန်သည်။
၁) အဲဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဟောပြောမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ရွေးတဲ့အခါ ပရိသတ်ကို ဘယ်လို role အနေဖြင့် မျှော်လင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးခဲ့ပါသလဲ။
၂) မိဘမေတ္တာ (အမေ့မေတ္တာ) နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဖော်ညွှန်းတင်စားချက်တချို့ကို ဆရာ တကယ် အသဲစွဲယုံကြည်ပါသလား။
၃) တကယ့်အဖြစ်အပျက်တချို့ကို ထားလိုက်ဦး။ မိဘမေတ္တာကို ညွှန်းဆိုပြောပြတဲ့အခါ reality မဟုတ်တဲ့စကား (ဥပမာ - မဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့ ယှဉ်ရင်၊ မြင်းမိုရ်တောင်နဲ့ယှဉ်ရင်၊ နှစ်သိန်းလေးသောင်းအထုရှိတဲ့ မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ ယှဉ်ရင်၊ မဟာစကြဝဠာနဲ့ ယှဉ်ရင်၊ ရေတစ်စက်စာ၊ ပေါက်သစ်စ နွားဦးချို၊ မြူမှုံပမာ၊ အပ်နဖားပေါက်) စတာတွေက နားထောင်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲ အဲဒီ မေတ္တာတရားကို ပိုမိုကြည်ညို ပျောင်းတိမ်းညွှတ်နူးသွားစေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါသလား။
(တကိုယ်ရေအမြင်ပြောရရင် ဆရာချစ်စံဝင်း ပြောနေတာနားထောင်ရတဲ့အချိန်မှာ ၁၀ တန်းတုန်းက အင်္ဂလိပ်စာမှာ သင်ရတဲ့ the4young men လား၊ ခေါင်းစဉ်မေ့နေပြီ။ လာလည်တဲ့ တရွာသားကို လူလည်လူငယ်လေးယောက်က ယုံတမ်းစကားပြောတဲ့ ပုံပြင်ပဲ တချိန်လုံး သတိရနေမိတယ်။
အကြောင်းအရာရင်းက ဘယ်လိုကောင်းကောင်း ဖွင့်ဆိုချက်က အရာမဟုတ်တဲ့အခါ မူရင်းကောင်းပြီးသားကြီး တန်ဖိုးတောင်ကျတယ်လို့ မြင်မိ။)
၄) ဆရာဟောပြောတာကို နားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်ကို ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။ (အမေ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဆရာရွေးချယ်ပြောသွားတဲ့ အကြောင်းအရာများကား အလွန်ပင် ထင်မှတ်မထားသဖြင့် အလွန်ပင် အံ့သြမိ။)
ကြံဖန်အကောင်းမြင်တတ်သူဟု လူထင်မခံချင်လှသော်လည်း ဆရာလက်ရှိ လုပ်နေရတဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ စကားချပ်လို ထည့်ပြောသွားတဲ့ အကြောင်းအရာအတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေ အနေအထား ကံပစ်ချရာ ဘာပဲပြောပြော လတ်တလော ရုန်းမထွက်နိုင်သေးတဲ့ အဖေတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ... ဆိုတာကို မြင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက်နဲ့တင် ဆရာ့မိဘမေတ္တာကို ယုံတမ်းဖြစ်အောင် ပြောသွားသော စကားများအား ချေလိုက်ပါသည်။
စတက်လာချင်းမှာပဲ "ဒါမျိုးပြောရင် သိပ်သဘောကျကြတယ်။ ကျွန်တော် မပြောဘူး။" ဆိုတာမျိုးက စလာတဲ့အတွက်နဲ့တင် တော်တော် ကျေနပ်သွားတယ်။ (စာရေးဆရာက စင်ပေါ်မှာ ပရိသတ်ပွဲကျအောင် တမင်တကာ လုပ်ပြစရာ အကြောင်းမှ မရှိတာ)။ အထူးပြောစရာမရှိပါ။ ကြိုက်ပါသည်။
အလွန်ကောင်းပါသည်။ ကိုယ့်အတွက်တော့ man of the literature talk.
ငါ ဆရာလုပ်တာ မင်းတို့ သည်းခံ လို့ တချိန်လုံးပြောသော်လည်း တကယ်တော့ ဆရာလုပ်တာ ပါတယ်လို့ မထင်ရ။
ပြန်ရေးပြစရာ ရုတ်တရက်မတွေ့နိုင်ပါ။ ရေးလည်းမနေတော့ပါ။ စာရှည်နေမည်။
အသက် ၈၅ နှစ်မှာ အတွေ့အကြုံအရရော ဉာဏ်ပညာအရပါ ပြောစရာ များ၊ များသမျှကိုလည်း ပြောခဲ့ပေမယ့် ပြောနေတဲ့စကားက ဘယ်ထိဆက်ရောက်ရောက် အဆုံးမှာ မူရင်းနေရာကို ပြန်ရောက်အောင် ကောက်နိုင်တာ အတော်ထူးတဲ့ ကုသိုလ်လို့ ထင်မိပါသည်။
ကွန်မြူနစ်သင်တန်းက တခုသော အကြောင်းအရာကို ပြောမယ့်အလုပ်မှာ "ငါ မြင်တာ ငါပြောတာနော်။ မင်းတို့ ယူချင်မှယူ" ဆိုတာကြားတော့ အားရမိ။ ဆရာရေးဖူးတဲ့ မဟာဝိဇ္ဇာတန်းတက်တုန်း ကျောက်စာသင်တော့ "အာနန်" ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆရာမင်းသုဝဏ် ဘယ်လိုကောက်ချက်ဆွဲပြခဲ့၊ ဘယ်လိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သတိရမိသည်။
ဆွေးနွေးခန်းမှာလည်း နိုင်ငံခြားရောက်မိဘများ၊ ကလေးများနဲ့ မြန်မာစာ စကားကိစ္စကို ပြောသွားတဲ့ ဆရာ့သဘောထားကိုလည်း ကြိုက်ပါသည်။ မှန်သည်။ ဒါသည် သူတို့ကိစ္စ၊ သူတို့ကိစ္စကို ဘေးလူက ကိုယ့်အမြင်ကိုသာ ပြောလို့ရမည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်က သူတို့လက်ထဲမှာသာ ရှိသည်။
ကျန်တဲ့ဆရာများနဲ့ပြောတာတွေကတော့ သိပ်စိတ်ထဲ မရှိလှပါ။
ဆရာမခင်ခင်ထူးနဲ့ ပြောကြတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးများနဲ့ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုအကြောင်းမှာတော့... ဟိုတုန်းက မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ မိန်းကလေးတယောက် ပွဲလမ်းသဘင်သွားတော့မယ်ဆိုရင် အိမ်က လူကြီးသူမတွေက မိန်းကလေးရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး အကဲခတ်ပြီး စိတ်တိုင်းကျမှ အိမ်အပြင်ကို ခြေတလှမ်း လှမ်းလို့ရတယ်။ ခုဒီနေ့ခေတ် နိုင်ငံခြားရောက် မိန်းကလေးတွေမှာတော့ အဲဒီလို "ဟဲ့" လို့ ပြောမယ့်သူ မရှိလို့ပါ ဆိုတယ်။
ဆရာမပြောသွားတာ ကြိုက်သည်လည်း မဟုတ်၊ မကြိုက်သည်လည်းမဟုတ်။ ဆရာမကိုယ်၌ကလည်း (ရည်ရွယ်၍လား၊ မရည်ရွယ်ဘဲလားမသိ) အဲဒီကိစ္စကို ကောင်းသည် ဆိုးသည်ဟု ပြောသွားတာ မဟုတ်။
(သူက ဒီအဖြစ်အပျက်ကို မှတ်ချက်ပြုပေးသွားတာ မဟုတ်ဘဲ၊ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကျိုးအကြောင်းသက်သက်လောက်သာ ပြဆိုသွားတာဖြစ်တော့ စောဒကတက်စရာ မရှိလှ)။
(အဲဒီနေရာမှာ ကောင်းသည် ဆိုးသည် ဆိုတာထက် တွေးမိတာတစ်ခုက) မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အခြေခံသဘောကိုက တယောက်ချင်းစီရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ရှေ့တန်းတင် အရေးပေးထားတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာပဲ။ အစုအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ သဘောကျ ကျေနပ်မှုစံနဲ့ ကိုက်ညီအောင် အဲဒီအစုအဖွဲ့ရဲ့ သြဇာခံတွေက (အဲဒီစံက အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီစံကို ကျေနပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မနပ်သည်ဖြစ်စေ) နေပြရတယ် ဆိုတာပဲ။
မြန်မာပြည်ဟာ တကယ်ပဲ ကျွဲပျောက်လို့ နွားရှာနေကြတာလား ဆိုတာ အဲဒီ ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့စကားကနေ ဆက်တွေးမိစေတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်၍ တခြားလူနှင့် တူရန်လိုသည်ဟု မထင်ပါ။ တူလို့လည်း ဘယ်သူမှ အကျိုးရှိမဖြစ်၊ မတူလို့လည်း ဘယ်သူမှ အကျိုးမရှိမဖြစ်။ ကိုယ့်အမြင်ကိုယ်ပြောနိုင်ခွင့် နှင့် ပြောပိုင်ခွင့်သည်သာ အဓိကဟု ယူဆသည်။
Posted by Rita at 5/08/2011 04:45:00 PM 11 comments Links to this post
ဒီလိုပဲ လူတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ...
အဖြစ်အပျက်တွေက ကျန်ခဲ့တာတွေ ရှိမယ်၊ ချန်ခဲ့တာတွေ ရှိမယ်။
သံယောဇဉ်တွေကတော့ ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်လာတတ်တယ်။
ဖုံးကွယ်ထားစရာလည်း မလိုပါဘူး။ ဒါဟာ လတ်တလောထားတဲ့ စောင့်သိ၊ စောင့်စည်းခြင်းနဲ့ မဆိုင်လို့ပါ။
အတိတ်ရဲ့ အမှတ်တရဆိုတာတွေကဖြစ်တဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ လက်ရှိစောင့်စည်းရမယ့် စည်းဆိုတာ လက်ဖမိုးနဲ့ လက်ဖဝါးလို၊ ခေါင်းနဲ့ ပန်းလို ကျောချင်းကပ်နေတာတွေ မဟုတ်ဘူးကွယ့်။ တစ်ခုကို ဖော်ပြနိုင်ဖို့ တစ်ခုကို မှောက်ထားစရာမလိုဘူး။ တစ်ခုကို ဖုံးကွယ်ထားမှ တစ်ခုကို လှစ်ဟပြဖို့ အဆင်ပြေတာ မဟုတ်ဘူး။
မေ့စရာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကို မေ့မယ့်သူမဟုတ်ရင်၊ စောင့်စရာ စည်းမှန်သမျှကို စောင့်စည်းဖို့လည်း ဝန်လေးမှာမဟုတ်ဘူး။ မေ့လွယ်ပျောက်လွယ်တဲ့သူမှသာ စောင့်စည်းနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်တော့ မှားလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ကတော့ သိမ်းဆည်းစရာမှန်သမျှကို သူ့အကန့်နဲ့သူ သူ့အကွက်နဲ့သူ မရောနှောဘဲ ထားဖို့ တတ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက်တော့ ဘဝက ပျားအုံတစ်ခုလို၊ ရေခဲခွက်တစ်ခုလိုပါပဲ။
(5th Feb 2011)
Posted by Rita at 5/05/2011 12:53:00 PM Links to this post
Labels: Diary, disorder